Isiteshi sokuthunga esizenzakalelayo
Ukuthunga i-Bartack nephethini
Inkinobho neparele kunamathiselwa
Phakela ususe ingalo
Umshini wokuthunga okhethekile
Umshini wokuthengisa oshisayo: umshini wokwamukela okheshi othomathikhi
Umsebenzi uzobiza kakhulu esikhathini esizayo. I-Automation ixazulula izinkinga ezenziwa ngesandla, ngenkathi i-digitalization ixazulula izinkinga zokuphatha. Ukukhiqizwa kobuhlakani kuyisinqumo esingcono kakhulu kumafektri. Umshini wethu wokuzenzakalela ephaketheni othomathikhi, izinkomba ezi-4 ngasikhathi sinye ukusonga ephaketheni, ukusonga nokuthunga ...
Ithuba lomshini we-laser welting ngo-2021
Ngemuva kokuthi imboni yomshini wokuthunga ithole "ukuthula" konyaka odlule, kulo nyaka imakethe yaletha ukuvuseleleka okuqinile. Ama-oda wethu wefektri ayaqhubeka nokwanda futhi sazi ngokusobala ngokululama kwemakethe. Ngasikhathi sinye, ukunikezelwa kwe-spar esezansi ...
UMsindisi wefektri yezingubo: Isethi esheshayo ye-pocket setter
I-TS-199 series setter is a high-speed othomathikhi wokuthunga wokuthunga ingubo ephaketheni. Le mishini yokusetha ephaketheni inokunemba okuphezulu kokuthunga kanye nekhwalithi ezinzile. Uma kuqhathaniswa nokukhiqizwa kwendabuko kwendabuko, ukusebenza kahle komsebenzi kukhuphuke izikhathi ezingama-4-5. Eyodwa ...
Umhlaba Kuqala: Umshini Wokuthunga we-Laser Pocket Welting othomathikhi
Ngabe usakhathazekile ngokungatholi isisebenzi esinamakhono? Ngabe usakhathazekile ngokunyuka kwezindleko zabasebenzi? Ngabe usajahe ukuthi i-oda liqedwe? Ngabe usakhathazwa yinkimbinkimbi nokuhamba kancane kokuthunga uziphu ephaketheni? Inkampani yethu muva d ...
Ncibilikisa ukukhiqizwa komoya
Inkampani yakhe isakhiwo esisha sefektri futhi yengeza imigqa yokukhiqiza encibilikisiwe engama-20, ngomkhiqizo wansuku zonke wamathani ayi-15. Manje sineqembu eliqinile lobuchwepheshe, sihlangabezana nezidingo zamazwe ahlukene ekusetshenzisweni okuhlukile kwemaski ngokusho kwezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ahlukile nge-cus engajwayelekile ...
Indwangu engalukiwe nokukhiqizwa kwendwangu encibilikisiwe
Inkampani yethu ibambisana ne-Changying non-woven fabric Co, Ltd ukukhulisa imigqa yokukhiqiza. Manje ukukhishwa kwansuku zonke kwendwangu engalukiwe kungamathani ayi-10, futhi okukhishwa kwendwangu encibilikisiwe kungamathani ama-3. Kuhlolwe ngokuqinile kuzo zonke izinto zokusetshenziswa, okuqondaniswe nekhwalithi kusuka kokuqukethwe okuyisisekelo kuya ku-masterbatch.
Isitolo Sokukhiqiza Imaski
Ngesikhathi se-coronavirus enzima eChina, inkampani yethu yathola imiyalo evela kuhulumeni yokwenza imaski yomshini namaski. Inkampani yethu futhi yahlela ngokushesha abasebenzi bezobuchwepheshe ukwenza i-R & D nokukhiqiza. Amaski esiwakhiqizile afinyelele ezingeni eliphakeme kakhulu ku-indu ...
ITopsew Sewing Equipment Equipment Co., Ltd.
Kuze kube sekupheleni kuka-2019, sinomugqa ogcwele womshini wokusetha ephaketheni, umshini wokuthunga wephethini we-bartack, umshini wokuthunga wephethini wohlobo lwe-Brother, umshini wokuthunga wephethini wohlobo lwe-Juki, i-Button snap, nomshini wokunamathisela iparele, nezinye izinhlobo zemishini yokuthunga ezenzakalelayo. 1. Umshini wokusetha ipokhethi: ephaketheni elingu-199 ...
Maphakathi No-Nov, Saya E-America Agent Ukuze Iphakethe Lokuzenzekelayo Lokuqeqeshwa
Ukuqeqeshwa kubandakanya: 1. indlela yokwenza uhlelo. 2. Ungalushintsha kanjani uhlelo. 3.Ungashintsha kanjani izibopho futhi ulungise umshini we-jean ephaketheni, ngemuva kwalokho sibafundisa ukuthi bangashintsha kanjani uqinisa futhi balungise umshini kube yipokhethi yehembe. 4. Ungayixazulula kanjani inkinga lapho ...
Ekupheleni kuka-Nov, 2019, Saya eFektri yeKhasimende laseBangladeshi Ukuze Kuqeqeshwe Umshini Wokuzenzela Ephaketheni.
Ngaphambi kokuba basebenzise umshini owodwa wensimbi ephaketheni, bese umshini wokubeka ephaketheni othomathikhi. Manje sebenzisa imishini yethu yokusetha ephaketheni yamahhala, ingonga umuntu osebenza naye nesikhathi. Uchwepheshe weKhasimende bafunda kanzima. Lapho befunda, nabo benza irekhodi. Ochwepheshe bahlakaniphe kakhulu. Ngemuva kwesonto ...